Meizu M8 Fanamarihana: fiasa, famaritana ary vidiny | Androidsis
Taorian'ny nialany somary teny ivelan'ny sehatra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, ny orinasa sinoa dia manana terminal vaovao vonona ho antsika, iray izay efa tafiditra ao amin'ny katalaogin'i sinoa ho eo anelanelany midadasika miaraka amin'ny famaritana mahaliana. Miresaka momba izany isika Meizu M8 Fanamarihana.
Ity fitaovana vaovao ity mampifangaro ny iray amin'ireo chipset vaovao indrindra an'ny orinasa amerikana, Qualcomm, izay ny Snapdragon 632. Ity fo ity dia omena singa mahasarika maso hafa, toy ny efijery sy ny fahaizany mitadidy. Mahalalà azy!
Ny M8 Note dia manasongadina a Efijery LCD lava 6.15-inch lava manana résolution 2.160 x 1.080 pixel FHD +. Izy io dia miaraka amin'ny taha 18: 9 mahazatra. Ho fanampin'izay, ny finday dia misy fakan-tsary 12 sy 5 MP fanamboarana fakan-tsary eo aorina, izay mifanaraka tsara. Ny fakan-tsary fakan-tsary dia mitovy amin'ny an'ny Meizu 16X -Ny variant hafa amin'ny Meizu 16 natomboka tamin'ny volana Aogositra-, fa amin'ity tranga ity, ny jiro LED dia eo an-tampony, raha eo ambany kosa ny fakan-tsarimihetsika.
Ny terminal dia miasa miaraka amin'ny Snapdragon 632 valo-core vao teraka avy amin'ny Qualcomm, izay fanavaozana ny Snapdragon 625 malaza sy fanta-daza. Ny SoC dia ampiarahina amin'ny 4GB RAM sy 64GB amin'ny toerana fitahirizana anatiny.
Mikasika ireo fiasa hafa, ny M8 Note dia mihazakazaka Android 8.1 Oreo ho rafitra fiasa miaraka MIUI ary manana bateria 3.600 mAh miaraka amin'ny fanohanan'ny mCharge mamaly haingana. Izy io koa dia manana famohana ny tarehy, fiasa izay tsy dia misy ao amin'ilay vaovao elanelam-potoana izay ampidirina amin'ny tsena ankehitriny.
Ny naoty M8 ho azo amidy manomboka ny 1 desambra any Sina amin'ny vidiny 1.298 yuan efa niorina, izay, ho takalony, dia sahabo ho 165 euro, izay fintinina amin'ny vidiny mirary tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Ny Meizu M8 Note dia ofisialy amin'ny Snapdragon 632 sy maro hafa